China NBR Latex Ukwenziwa kunye Factory | FIZA
I-Carboxylated butyronitrile Latex yokuntywilisela luthotho lweemveliso zobisi zeplastiki ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zophuhliso lwelatex, kubandakanya ukudipha iiglavu zelatex kunye nelatex. Uthotho lweemveliso zelatex ngeoyile, zinxibe, zinqabile, amandla aphezulu kunye nobude beempawu. Itekhnoloji yokuveliswa kwelatex yokuntywiliselwa kwesithathu ifezekisile imveliso yezamashishini, iya kuthoba ixabiso kunye nomgangatho olungileyo wokubuyisela iimveliso ezingeniswe elizweni. Njengokuba izinto ze-latex kwikhonkco zivelise umsebenzi weqela, ke ineoyile, ukumelana nesinyibilikisi, kodwa kunye nesalfure, intsimbi enqamleza indlela yokuqhagamshela, kodwa ikwakhona kulula ukwenza ifilimu, iTuomo, kunye nezinye izinto.
I-Carboxyl NBR latex luhlobo lwe-emulsion ephezulu yokusasazeka kwe-emulsion eyenziwe nge-butadiene, kunye ne-Acrylonitrile ngeendlela eziphambili. Njenge-emulsion emhlophe emhlophe ngembonakalo, yenye yezinto ezithandwayo ezithandwayo kwimizi-mveliso yokuntywila, isetyenziselwa ukuvelisa iiglavu zokukhusela kunye neiglavu zonyango.
Umba Iiyunithi Inkangeleko
Inkangeleko Ubisi olumhlophe
Umxholo oqinileyo % 42-46%
Ixabiso le-PH Imitha eyi-8.0
Ukungabikho mPa.s UMax 260
Ukuzinza koomatshini % Ubungakanani 0.1
Amagubu eplastiki angama-200kg, i-1000kg IBC, i-Tank eguqukayo ye-20000kg.
Ukuhamba kunye nokugcinwa phakathi kweqondo lobushushu le-0-40 protect, khusela ekubandeni nasekuchaphazelweni ngokuthe ngqo kukukhanya kwelanga, iziqulatho ezivaliweyo xa zingasetyenziswanga; Ubomi beshelf yeenyanga ezi-6 ukusuka kumhla wemveliso phantsi kwemeko elungileyo yokugcina.
Egqithileyo Isisixhobo somoya
ICarboxyl Nbr iLatex
Utywala lweNate Latex
I-Nbr iLatex Polymer
I-Nbr Latex White Liquid
Ixabiso leNbr Latex